Kedu ihe kpatara nwamba m ji eri anụ? | Nwamba Noti
Kedu ihe kpatara nwamba m ji eri anụ?
Maria Jose Roldan | | Nri, Curiosities
Oge nri kwesịrị ịbụ oge dị jụụ nye onye ọ bụla, ma ha nwere ụkwụ abụọ ma ọ bụ anọ. Mana oge ụfọdụ anyị na-ahụ nwamba onye ọ na-eme ọsọ ọsọ mechaa nri ya wee bido ime ihe ndị ọzọ. Kedu ihe enwere ike ịme n'ọnọdụ ndị a?
Mgbe nwamba m jiri nwayọ rie nri, ama m na oge eruola ka echegbuo m. Ọ dịghị njọ ka m rie oke nri na ngwa ngwa. Iji nyere gị aka, ọ dị mkpa ibu ụzọ mara ihe mere i ji eme ya.
1 Kedu ihe kpatara nwamba m ji eri anụ?
1.1 Ọ bụ nwamba nwa mgbei
1.2 Na-ata ahụhụ
1.3 Ọ na-atụ ụjọ site na okike
1.4 Gaa agụụ
1.5 Obere nri
1.6 Ahụhụ na nsogbu nke mmetụta uche
1.7 Ihe ndị ọzọ na-akpata ya
2 Kedu ihe ị ga-enyere gị aka?
Ọzọ anyị ga-ahụ ihe kpatara ya ka i wee nwee ike ịghọta ihe ndị ọzọ kpatara nwamba gị nwere ike iji ụdị nri a na ọ bụ ya mere o ji eri oke nri.
Ọ bụ nwamba nwa mgbei
Nwamba na-azụbeghị nne ya, n'agbanyeghị ihe kpatara ya, na-etolitekarị na-enye echiche na ọ na-agụ agụụ mgbe niile. Nke a bụ n'ihi na ka anyị na-enye ya karama, anyị karịrị ya nke ukwuu nke na anyị achọghị ka agụụ na-agụ ya maka otu nkeji, nke ezi uche dị na ya. A) Ee, Onye obere na-etolite n’ịmara na ya ga-eri nri n’aka ya oge niile na ọ nweghị onye ga-agwa ya ihe ọ bụla gbasara iri nri, yabụ na-eji ya eme ihe.
Kaosinadị, nne ahụ na-ahapụ ụmụ kittens ahụ obere agụụ. Ikwesiri ma oburu na ichoro ka ha muta ichota nri ha n'onwe ha ebe obu na ogagh ano gi nso.
Ọ bụrụ n ’ụlọ, e nwere ihe ọzọ dị ndụ (pusi, nkịta ma ọ bụ mmadụ) nke na-anaghị ahapụrụ gị naanị gị, ya bụ, na ọ na-achụ gị ma ọ bụ na-ele gị oge niile, na-achọ ijide gị oge niile, na nkenke, na-eme ekwela ka ị bie ndụ dị jụụ nke pusi, ọ nwere ike iche na o nwere obere oge iri nri. Mgbe o mechara chọta oge o rie nri ọsọsọ n'ihi na ọ ma na ọ ghaghi ichi ọzọ.
Ọ na-atụ ụjọ site na okike
Nwamba ụjọ na-eri nri ha ngwa ngwa karịa ndị ọzọ, ọ bụghị n'ihi na ha na-ebi ndụ ọjọọ kama ọ bụ nanị n'ihi na ha dị otú ahụ. Ga-enwerịrị ndidi ma gbalịa ịchọta azịza iji zere ịkwanye.
O nwere ike bụrụ na agụụ na-eri nwamba gị n'ihi na na-agaghị eriju afọ, n’ihi na agụụ na-agụ ya na mgbe ị na-etinye ya ka ọ rie nri ọ na-afọ obere ka ọpụpụ iku ume ya iji mechaa ihe niile.
O nwere ike ịbụ n’ihi na agụụ na-agụ ha nke ukwuu ma ọ bụ n’ihi na ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ nwamba, n’oge ndị ọzọ agụụ na-agụ ha mgbe nwamba ndị ọzọ riri nri site na onye na-enye ha nri. Yabụ Ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ịnwe karịa pusi n'ụlọ, nke ọ bụla nwere onye na-eri ya na onye na-a drinkụ ya.
Ikekwe emesịa, onye ọ bụla na-eri ebe onye ọ bụla ọzọ na-eri, mana a ga-ezuru ka onye ọ bụla rie oke nri ya ma agụụ agaghị agụ ya.
Nọmalị nwamba nwere ike iri ihe na-enweghị nsogbu n'ihi na ha na-eri nri nke ha ha na-akwụsịkwa afọ ojuju. Mana oburu na inwere oke nwuru oke, i ghaghi inye nri nri.
Ọ bụrụ na nke a emee gị, ịmara na nwamba nwere ike iri nri otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'ụbọchị ọ ga-ezuru ha ma ọ bụrụ na ego ahụ zuru.
I nwere ike iche na echere m na ị na-enye nwamba gị ezigbo mma, mana n'eziokwu, enweghị nri na vitamin dị mkpa ka ha nwee ezigbo ahụike ma ọ bụ opekata mpe afọ ojuju na ha riri.
Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, ọ bụrụ na echere m na ị na-enye nwamba gị obere mma, ọ dị mma ka ọ chọọ ma ọ bụ rịọ maka nri ọzọ. Naghị azụ ya nke ọma ma ọ chọrọ nri! Gwa onye na-agwọ ọrịa gị ka ọ gwa gị ihe ị ga-eri n’eme ya obi ụtọ ma n'otu oge ahụ, lekọta ahụ ike gị ma n'ime ma n'èzí.
Nwamba chọrọ protein na nri nke ezigbo mma. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ n’ibụ nwata ma ọ bụ tịla nka, nri ahụ kwesiri ekwesi maka mkpa anụ ahụ na nke mmụọ gị.
Kedu otu esi ahọrọ nri pusi kacha mma?
Ahụhụ na nsogbu nke mmetụta uche
O nwekwara ike ime na nwamba gị chọrọ iri nri n'ihi na ọ na-agwụ ya ike, ma ọ bụ na o nwere nsogbu mmụọ nke a maara dị ka "omume anụ ahụ na-adịghị mma". Nke a pụtara na gị pusi na-eri ahụ nri, na nsonaazụ niile nke a nwere ike inwe na ahụike gị.
Ọ bụrụ na nke a emee gị ị ga-azụ ya ka ọ gbanwee omume yaỌ bụrụ na ọ dị mkpa, ị ga-agwa onye ọkachamara agwa omume ka ịgbanwee omume a. Mana nke a ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà dịka:
Mgbe o risịrị nri, ọ chọrọ iri nri ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na nke gị
Wụpụ na tebụl ka ị rie ihe dị na ya
O yiri ka ọ na-achọsi ike mgbe ị na-etinye nri na nri ya
Na-achọ nlebara anya mgbe niile n’aka ndị nwe ha
Rie ihe ma obu taa ya oburu na ha abughi nri
Mgbaàmà ndị a dị ezigbo mkpa iburu n'uche n'ihi na n'ụzọ dị otú a ị ga-enwe ike ịmata ma ọ bụ n'ezie ihe na-eme gị iji dozie ya ozugbo enwere ike.
Ihe ndị ọzọ na-akpata ya
Agbanyeghi na ihe anyi huru ugbua bu isi ihe kpatara nwamba nwere ike iri nri na nchekasị, enwere ndi ozo anyi aghaghi iwepu:
Ọ hụrụ nri ya n’anyaỌ na-atọ ya ụtọ nke ukwuu nke na ọ nweghị ike ịza ma loda ya ngwa ngwa dị ka ọ na-eme.
Ọ na-arịa ọrịa: Enwere ụfọdụ ọrịa, dị ka hypothyroidism, na-arịa nrịanrịa thyroid ma ọ bụ nwee ọrịa shuga, nke n'etiti mgbaàmà ha bụ mmụba nke agụụ. Mana ikwesighi itu ujo otutu oria ndi a bu ndi oria.
Kedu ihe ị ga-enyere gị aka?
Ozugbo ịchọtara ihe kpatara ya, ọ bụ oge ime ihe. Otu n’ime ihe ndị kacha arụ ọrụ kacha mma ịzụrụ onye na-eri nri pụrụ iche maka ụmụ anụmanụ na-echegbu onwe ha, dị ka nke a:
Ya mere ntakịrị ị ga-arụ ọrụ ntakịrị iji nweta nri gị, nke ga-amanye gị iri nri nwayọ nwayọ. Mana na mgbakwunye, ọ dị ezigbo mkpa na a na-enye ebe nchekwa na jụụ ebe ọ ga-eri nri ya na-enweghị nsogbu ọ bụla, dịka ime ụlọ ihi ụra dịka ọmụmaatụ.
Burukwa n’uche na ọ bụrụ na a na-amaja gị anyị ga-emerịrị oke ụfọdụ nke mere na onye obula no n’ulo n’ebi onu n’enwe obi uto. Anyị kwesịrị ịkwanyere onye ọ bụla so na ya ùgwù, ma ọ bụghị ya, nsogbu ga-ebilite. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere otu esi aghọta pusi gị, na Akụkọ a Anyị na-enye gị mkpịsị ugodi ka mmekọrịta gị baa uru maka gị abụọ.
Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị a enyere nwamba gị aka, gwazie onye na-arịa ọrịa anụmanụ gị ma ọ bụ ọkachamara ọ bụrụ na ihe agaghị eme nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, ịnwere ike iburu ndụmọdụ ndị a n'uche:
Lezienụ anya na ya ma soro nkịta gị nwee ezigbo oge
Nye ya ezigbo nri
Nye ya nri mmiri ugboro ole na ole n’izu na mgbakwunye na nri kpọrọ nkụ ya
Tinyekwu mmiri ka ọ drinkụọ ma ghara ị notụ mmiri ma nwee afọ ojuju ruo ogologo oge
Nọgide na-eme ụfọdụ nri nri kwa ụbọchị (dịka ọmụmaatụ ugboro abụọ n'ụbọchị), ma ọ bụ nyekwuo ya oge n'ụbọchị, mana na obere ego
Ọ bụrụ na ọ rịọ gị nri, eleghara ya anya
Gbalịa imeghari oge nri gị na nke ha iji zere esemokwu nke ọnwụnwa
Enyekwala ya nri maka na ọ na-eme gị ebere
Site na ndụmọdụ ndị a pusi gị ga-aka mma, n’ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nwamba Noti » Nwamba » Nri » Kedu ihe kpatara nwamba m ji eri anụ?
Ozi niile enyere na saịtị a bara ezigbo uru: nke dị nkenke yana asụsụ enyi. Daalụ!
Zaghachi Marcelo, Rosario, Argentina
Daalụ maka okwu gị, Marcelo 🙂.
Ihe na-akpata feline alopecia